सिस्टमै फेर्नुपर्छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
युवाहरुले प्रदर्शन गर्दैछन् भनेर फेसबुकमार्फत थाहा पाएँ । त्यसपछि मलाई पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले मम्मीलाई सोधें । मम्मीले जानु पर्दैन भन्नुभएको थियो कोरोनाका डरले ।
अब त अति नै भइसक्यो, केही परिर्वतन आउनुपर्छ भन्ने कुरा मम्मीलाई पनि थाहा थियो । त्यसपछि उहाँले मलाई जान दिनुभयो । पहिलो पटक बालुवाटारमा पुग्दा डर लागेको थियो कोरोनाको । तर त्यहाँ पुगेपछि मैले डर भुलेँ । त्यतिखेर मलाई सरकार होइन हाम्रो सिस्टम नै फेर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर त्यहाँ गएको थिएँ ।
पुलिसले पानीको फोहोरा हान्दा चाहिँ म निस्किसकेको थिएँ । अर्को पटक माइतीघरको प्रदर्शनीमा म केही समय बसेपछि हुलदंगा होला भनेर त्यहाँबाट हिँडेको थिएँ ।
हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने अब अति भइसकेको छ ।
म सानो रेस्टुरेन्ट चलाउने मान्छे हुँ । म कति निराश भएको छु ! अरुको त व्यवसाय होला तर मेरो व्यवसाय खुल्न त समय लाग्छ ।
जनताले कतिञ्जेल सहेर बस्ने ? सिस्टम राम्रो बनाएर, राम्रोसँग मिलाउँदै जाने हो भने कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी आउँदै जान्छ । लकडाउन मात्रै गरेर त हुन्न नि ! त्यही भएर सरकारलाई दबाब दिन म तेस्रो पटक पनि प्रदर्शनीमा गएँ । हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्‍यौं राष्ट्रिय गान गाएर । त्यो दिन नेपालको नक्सा पास भएको दिन थियो । त्यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद पनि दियौँ ।
यो अर्थपूर्ण विरोध हो भनेर गएको हुँ । कोरोना सर्न सक्छ भन्ने डर लगेको त थियो तर भोक र सरकारले गर्दा धेरै मान्छे मर्लान् जस्तो लागेर म प्रदर्शनमा सहभागी भएको हुँ ।